I-Costco yokuphinda uqalise iphepha langasese kunye nomlinganiselo wokuthengwa kwamanzi asezibhotileni
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Shopping » I-Costco yokuphinda uqalise iphepha langasese kunye nomlinganiselo wokuthengwa kwamanzi asezibhotileni
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Kunyaka ophelileyo bekukho ukunqongophala kwempahla yokuthengisa, ngoku banentengiso eninzi, kodwa kukho ukulibaziseka kweeveki ezimbini ukuya kwezintathu ekuziseni ngenxa yokuba kukho umda kutshintsho lwexesha elifutshane kwiilori kunye neemfuno zokuhambisa zomthengisi.
I-Costco ibhengeze umda wokuthenga oza kubakho kwimpahla ethile ngexesha lokufowuna ngoLwesine.
Imida yokuthenga evuselelweyo iza emva kokuba iinkampani ezininzi zibeke imithetho efanayo kulo nyaka uphelileyo njengoko ubhubhane uqalile, ushiya iishelufa zevenkile ziphulukene nezinto ezithile eziyimfuneko.
I-Costco I-CFO ikwaqwalasele ukuba ukunqongophala okukhulu kweetshipsi zekhompyuter "kusachaphazela izinto ezininzi," kubandakanya iipilisi, imidlalo yevidiyo kunye nezixhobo eziphambili.
I-Costco Wholesale Corporation, inkampani yamazwe aphesheya yaseMelika, eqhuba ngaphezulu kwe-500 yeebhokisi ezinkulu ezithengisa kwiivenkile ngaphesheya kwe-US kunye ne-200-plus phesheya, ibhengeze ukuba izakubeka umda wokuthenga kwezinye izinto ezithengisayo, ngexesha lokufowuna ngoLwesine.
Ngoku ka CostcoIgosa eliyintloko lezemali (CFO) uRichard Galanti, umthengisi waseMelika uza kuphinda aqale umda ekuthengweni kwezinto ezithile "eziphambili", kubandakanya iphepha langasese kunye namanzi asebhotileni.
Ekhokela umnxeba wengeniso yequmrhu, uGalanti wachaza inani loxinzelelo kumxokelelwano wokubonelela kwaye waqaphela ukunyuka kwemfuno ngenxa yalo bhubhani, esithi Covid-19 Ukwahluka kweDelta kukuqhuba kakhulu kuluhlu lwempahla.
"Izinto ezinyanzelisa unikezelo lwamatyathanga kunye nokunyuka kwamaxabiso kubandakanya ukulibaziseka kwamazibuko, ukunqongophala kweekhonteyina, ukuphazamiseka kwe-COVID, ukunqongophala kwezinto ezahlukeneyo, izinto ezingavuthiweyo kunye nezithako, uxinzelelo lweendleko zabasebenzi kunye nokusilela kweloli kunye nokuqhuba," utshilo uGalanti, esithi "ucwangciso lubalulekile" imingeni.
I-CFO ayichazanga ngokuthe ngqo ukuba imida iya kuphinda ibuyiselwe- kunye Costco ukuthengwa kwangaphambili kwezinto ezithile kwiintsuku zokuqala ze-COVID-19.
Ebonisa izizathu zokunqongophala, uGalanti ubonise umzekelo wenkampani enye yokubonelela ngokucoca izinto ezisokolayo ukugcina izinto ezishelfini, esithi zijamelene neengxaki ezahlukeneyo ngoku kunangowe-2020.
“Kunyaka ophelileyo bekukho ukunqongophala kwempahla yokuthengisa, ngoku banentengiso eninzi, kodwa kukho ukulibaziseka kweeveki ezimbini ukuya kwezintathu ekuziseni ngenxa yokuba kukho umda kutshintsho lwexesha elifutshane kwiilori kunye neemfuno zokuhambisa zomthengisi, " uthe.
I-CFO ikwaqwalasele ukuba ukunqongophala okukhulu kweetshipsi zekhompyuter "kusachaphazela izinto ezininzi," kubandakanya iipilisi, imidlalo yevidiyo kunye nezixhobo eziphambili, ukucebisa ukuba ezi ngxaki "zinokwanda ziye ku-2022."
Imida yokuthenga evuselelweyo iza emva kokuba iinkampani ezininzi zibeke imithetho efanayo kunyaka ophelileyo njenge Covid-19 Ubhubhane buye baqhubeka, kushiya iishelufa ezivenkileni zihluthwe izinto ezithile eziyimfuneko- mhlawumbi eyintloko phakathi kwazo: iphepha langasese.
Nangona abathengisi bebuyile umva ngandlela thile ukususela kwinqanaba lokuqala lokuthenga uvalo, ngo-Matshi, i-CEO yomvelisi womthi waseBrazil-pulp walumkisa ukuba enye ukunqongophala kwe-TP kwihlabathi liphela kunokuba kwikona, esithi ukungabikho kwezikhongozeli zokuhambisa kunokuvelisa ibhotile enzima yokuhambisa.